Motivation for success :: अस्ट्रेलिया भिसा लागेन ? चिन्ता नलिनुहोस्, राइटपाथले ल्याएको छ गजवको अफर
अस्ट्रेलिया भिसा लागेन ? चिन्ता नलिनुहोस्, राइटपाथले ल्याएको छ गजवको अफर
प्रकाशित मिति : बुधबार, असार १ २०७९
काठमाडौँ – नेपाली विद्यार्थीका लागि लोकप्रिय शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा स्थापित छ अस्ट्रेलिया । राम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरु, अस्ट्रेलियन डिग्रीको विश्वभर माग हुनु, अध्ययन गर्दै काम पनि गर्न सकिने भएकाले यहाँ विद्यार्थीको आक्रषण बढेको हो ।
कोभिड १९ संक्रमणपछि अष्ट्रेलियाले विद्यार्थीहरुलाई सहज आवागमन दिएको थियो । विद्यार्थी भिसाका लागि आएका सबै निवेदनहरुमा भिसा दिएको अस्ट्रेलियाले केही दिनदेखि फिल्टर गर्न थालेको छ । अहिले सामान्य रिजेक्सन देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले जस्ता पनि विद्यार्थीलाई आवेदन दिन लगाएपछि रिजेक्सनको अवस्था आएको हो । ४/५ बर्षअघि अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीलाई पनि आवेदन दिन लगाएपछि रिजेक्सन आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अस्ट्रेलियाले धेरै स्टडी ग्याप भएका विद्यार्थीहरुलाई भिसामा कडाई गर्ने गरेको छ ।
तर भिसा रिजेन्सन भएका विद्यार्थीहरुका लागि भनेर धेरै निरास हुन पर्ने अवस्था छैन्, किनकी राइटपाथ करिअर काउन्सलिङले विशेष अफर ल्याएको छ । काठमाडौँको पुतलिसडकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राइटपाथले देशभरका शाखाहरुबाट आउने यस्ता खालका विद्यार्थीहरुका लागि विशेष सुविधा दिने बताएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर आएका राइटपाथका फाउण्डर सिइओ फिलिप डिसीले निराश भएका विद्यार्थीहरुलाई राहत दिनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको बताए । ‘विद्यार्थीहरुका लागि हामीले राम्रो सुविधा दिएका छौँ । अस्ट्रेलिया रिजेक्सन हुँदैमा सपना सकिदैन् ।’ डिसीले भने, ‘अस्ट्रेलियाको विकल्प बेलायत हो । विश्वका उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयहरु बेलायतमा छन् ।’
उनले सांच्चिकै अध्ययनका लागि अब्रोडको सोच भएका विद्याथीहरुका लागि बेलायत सबैभन्दा उत्कृष्ठ शैक्षिक गन्तव्य भएको बताए । विश्वमा विश्वविद्यालयको ¥याङकिङ हेर्दा उत्कृष्ठ १०० विश्वविद्यालयमा अधिकांश बेलायतका छन्’, डिसीले भने, ‘राम्रो डिग्री ल्याएर उज्ववल भविश्य बनाउनका लागि बेलायत उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य हो ।’
भिडियो मार्फत सुन्नुहोस् डिसीका कुरा